Shirwaynaha dhalinyarada Soomaaliya oo Moqdisho ka furmay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Shirwaynaha dhalinyarada Soomaaliya oo Moqdisho ka furmay
Shirwaynaha dhalinyarada Soomaaliya oo Moqdisho ka furmay
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta Magalada Muqdisho si rasmi ah uga furay shir-weynaha Qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed, kaas oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Mudadii uu socoday waxaa hadallo ka jeediyay Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo Wasiirka dhallnyarada Khadiijo Maxamed Diiriye,iyagoo ka hadlay ahmiyadda ay arrintan u leedahay bulshada.
Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ujeedka shirkan uu yahay sidii loo cadeyn lahaa kaalinta ay dhalinyaradu kaga jirto arrimaha siyaasadda ,maadaama ay yihin laf-dhabarkii dalka.
Mahdi maxamed Guuleed ayaa amaanay kalinta dhalinyarada ay ku leeyihiin horumarka dalka,isagoo ku dhiirogeliyay in ay sii xoojiyaan dadaalkoodi ku aadan dib u dhiska iyo horumarka dalka.
Shirkan oo socon doono muddo labo maalmood ah ayaa la filayaa in laga soo saaro qodobo muhiim ah,waana Shir sanadkiiba mar la qabto.
Previous articleDib u habayn lagu sameeyay Guddiga Maaliyadda Baarlamaanka
Next articleIsrael oo duqaysay Suuriya